Maamul la filayo iney aqoonsato dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa laga yaabaa iney aqoonsato maamulka 3-da gobol ee horay looga dhawaaqay magaalada Baydhabo ee xarrunta gobolka Baay, kaasoo uu ka horreeyey maamul kale oo isla magaalada looga dhawaaqay, kana koobnaa 6 gobol.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Mareeg Media ayaa sheegaya in dhexdhexaadin laga dhex sameeyey dadka ku nool Baay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose lagu gaaray isu soo dhawaasho.
Ergayga Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya, Danjire Nichols Kay ayaa horay ula kulmay hogaamiyaasha kala horkacayey maamulka lixda gobol Madoobe Nuunow iyo saddexda gobolka Maxamed Xaaji C/nuur.
Qaramada Midoobay ayaa horay labada dhinac kala hadashay iney meel isugu yimaadaan, mana cadda in aqoonsiga la filayo in la siiyo maamulka saddex gobol ay soo wada dhawweyn doonaan ragii dhisay maamulak lixda gobol.
Waxaa lagu wadaa in Muqdisho lagu qabto munaasabad lagu shaacinayo cidda dowladda Soomaaliya aqoosatahay, iyadoo la ogyahay in hray dowladda u diiday aqoonsiga maamul lix gobol ah maadaama uu faraha la gelayo gobollo 3 ah oo maamul ka jiro, kuwaasoo kala ah: Jubada Hoose, Juabda Dhexe, iyo Gedo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kooxda uu hogaaminayo Madoobe Nuunoow Maxamed ee lixda gobol waxaa lagu qanciyay inay kusoo biiraan maamulka Saddexda Gobol oo ay dadkooda dhinac ka raacaan.
Hadii dowladda Soomaaliya aqoonsato maamula 3-da gobolka ee Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waxaa meesha ka baxaya maamulka lixda gobol oo sheegta inuu u dhisan yahay Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Jubada Hoose, Juabda Dhexe, iyo Gedo
Waxaa sidoo kale meesha ka abxaya maamulka Shabeelle State, kaasoo sheegta inuu u dhisan yahay Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
Kenya air strikes Somali Shebab bases: African Union